ရာသီမမှန်ရင် ကလေးရနိုင်သလား . . . – Healthy Life Journal
ရာသီမမှန်ရင် ကလေးရနိုင်သလား . . .
မေး ။ သမီးကအသက်၂၆နှစ်၊ အမျိုးသားလည်း ၂၆နှစ် ပါ။ သမီးက အပျိုကတည်းက ရာသီက ၂လ-၃လ၊ တစ်ခါတစ်ခါဆို ၄လတစ်ခါလောက်မှ လာတာပါ။ သမီးအမေလည်း အရင်က အဲလိုပဲ ရာသီမမှန်ဘူးတဲ့ ဆရာ။ မျိုးရိုးများ လိုက်တာလားလို့။ သမီး အခုအိမ်ထောင်ကျတာ၂နှစ်ရှိပြီဆရာ။ ကလေးလိုချင်လို့ပါ။ အခုထိလည်း ရာသီိမမှန်သေးပါဘူး။ folic acid, vitamin E, omega3တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ပါတယ်။ သမီး ကလေးကော ရနိုင်ပါ့မလား ဆရာ။
ဖြေ ။ သမီးက ၀ကစ်ကစ်လေးလား။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရာသီမမှန်ဘူး၊ လူက ဖိုးဝရုပ်လေးလို လုံးလုံးလေးဆိုရင်တော့ “PCOS” လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း မမှန်တဲ့ ပြဿနာရှိနေပြီ။ ဟော်မုန်းမမှန်၊ ရာသီမမှန် ဥမကြွေရင် ကလေးရဖို့ခက်။ အရေးကြီးဆုံးက ၀နေရင် ပိန်အောင်လုပ်ဖို့၊ Lifestyleကိုပြင်ဖို့၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးကုရမှာ။ ဒီအတိုင်း ၀၀ဆိုရင် ကလေးမရရုံမက ကြီးလာရင် ဒီထက် ပိုဝ၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပိတ်၊ လေဖြတ်ရောဂါတွေ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၂နှစ်ရှိပြီ၊ ကလေးမရသေးဘူးဆိုတော့ အိုဂျီနဲ့မြန်မြန်ပြဆေးကုဖို့ လိုပြီ။
Related Items:conceive, Menstruation, Pregnancy